Hydrite® (ဟိုက်ဒရိုက်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Hydrite® (ဟိုက်ဒရိုက်)
Hydrite (ဟိုက်ဒရိုက်) ကဘာလဲ။
ရေးသားသူ Dr. Sandar Lin ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. K Zin Thwe
Generic Name: Hydrite® (ဟိုက်ဒရိုက်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Hydrite ကို မည်သည့်အကြောင်းအရာများအတွက် အသုံးပြုကြပါသလဲ။
Hydrite ဆေးပြား တွင် NaCl 350 mg ၊ KCl 150 mg နှင့် သကြား 2mg ပါဝင်သည်။ ၎င်းကို ဝမ်းလျှောခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း များတွင် ခန္ဓါကိုယ်မှ ရေနှင့် ဓါတ်ဆားများဆုံရှူံးသွားသောအခါ ဓါတ်ဆားနှင့် ရေဓါတ် ပြန်ဖြည့်ရန် အသုံးပြုကြသည်။
Hydrite ဆေးပြား ကို ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်ပါသလဲ။
Hydrite ဆေးပြားကို ရေ နှင့် ဖျော်၍ သောက်သုံးလို့ ရပါသည်။ ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် ထားပါက၂၄နာရီ အထားခံပါသည်။ ၂၄နာရီကျော်လျှင်အသုံးပြုလို့ မရပါဘူး။ အသုံးမပြုခင်မှာမွှေ ဖို့မမေ့ပါနှင့်။
သင်မရှင်းတာရှိသော် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွှေး နိုင်ပါသည်။
Hydrite ဆေးပြား ကိုဘယ်လိုသိုလှောင်သိမ်းဆည်းထားသင့်ပါ သလဲ။
Hydrite ဆေးပြား ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင် သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ် တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Hydrite ဆေးပြား ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Hydrite ဆေးပြား ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ် မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံ ကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု ညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Hydrite ဆေးပြား ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Hydrite ဆေးပြား ကိုမသောက်သုံးခင်မှာ ဘယ်အချက်အလက်တွေကို သိထားသင့်သလဲ။
သင့်တွင် အောက်ပါအခြေအနေများ ရှိလျှင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှု ပြုလုပ်ပါ။
Hydrite ဆေးပြား တွင်ပါဝင်သော ပစ္စည်းများနှင့်ဓါတ်မတည့်သောသူ
အခြားဆေးဝါး၊ အစားအစာ၊ ဆိုးဆေး နှင့် တိရစ္ဆာန်အမွှေးအမျှင် များနှင့်ဓါတ်မတည့်သောသူ
Hydrite ဆေးပြားနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်သော အချို့သော ကျန်းမာရေး အခြေအနေ ရှိသူများ နှင့် ဆေးဝါးများ သောက်သူနေသူများ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေတဲ့အချိန်မှာ သောက်ဖို့ စိတ်ချရရဲ့လား။
ယခုဆေးဝါးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက် နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန် အတွက် လုံလောက်သော လေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကို ချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။
Hydrite ဆေးပြား က ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိနိုင်လဲ။
Hydrite ဆေးပြား ကိုသောက်ပါက ဆိုးကျိုးများ ရှိနိုင်သော်လည်း အများစုမှာ ကုသမှုမလိုအပ်ဘဲ ဖြစ်ခဲပါသည်။ သို့သော်လည်း သင့်တွင် ပြဿနာ တစ်စုံတစ်ရာရှိလာလျှင် ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင် ဆွေးနွှေးသင့်ပါသည်။ ဖြစ်နိုင်သော ဆိုးကျိုးအချို့ကိုအောက် တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။
ယခုဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ခံစားရမှုမှာ တစ်ဦး နှင့် တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ အထက်ဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင် မပါဝင်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး များလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါက သင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါး ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပါ။
ဘယ်ဆေးဝါးတွေက Hydrite ဆေးပြား နဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင် သလဲ။
Hydrite ဆေးပြား ဟာ သင်အခုလောလောဆယ် သောက်သုံးနေ တဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေး ဝါးတွေ အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ် တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိ သောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထား တာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
Fluorodeoxy glucose f18
အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာတွေက hydrite ဆေးပြား နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ပါသလား။
Hydrite ဆေးပြား က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုး သက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှု တွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာ တွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်လိုကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေက hydrite ဆေးပြား နဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိမလဲ။
Hydrite ဆေးပြားဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေ များနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
AV Block (နှလုံးသွေးဝင်ခန်းမှ သွေးလွှတ်ခန်းသို့ လျှပ်ကူး အချက်ပေးလမ်းကြောင်း ပိတ်ဆို့ သော နှလုံး ပြဿနာ)
Congestive heart failure (နှလုံးစွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်း၍ ခန္ဓါကိုယ်တွင် အရည်များစုပုံသော ရောဂါ)
Electrolyte ဓါတ်များ မပါဘဲ dextrose သကြားဓါတ်ဆေးသွင်းခြင်း
ယခုဖော်ပြပါအချက်အလက်များသည် ဆေးပညာရပ်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များနေရာတွင်အစားထိုးရန်မဟုတ်ပါ။ ဆေးမ သောက်သုံးခင်မှာ ဆရာဝန်နှင့်ဖြစ်စေ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူ နှင့်ဖြစ်စေ အမြဲ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာ hydrite ဆေးပြား ကို သောက်သုံးရမယ့်အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
Hydrite ဆေးပြား သောက်ရန် ဆေးအချိုးအစားကိုဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွှေးပါ။
ကလေးငယ်တွေမှာ hydrite ဆေးပြား ကို သောက်သုံးရမယ့်အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
Hydrite ဆေးပြား သောက်ရန် ဆေးအချိုးအစားကိုဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Hydrite ဆေးပြား ကို ဘယ်လိုပုံစံမျိုး အချိုးအစားမျိုးတွေနဲ့ ရရှိနိုင်မလဲ။
Hydrite ဆေးပြား ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဆေးတစ်ပြားတွင် NaCl 350mg ၊ Na bicarbonate 250mg ၊ KCl 150 mg ၊ anhydrous glucose2mg ပါဝင်ပါသည်။
အရေးပေါ်အခြေအနေတွေ၊ ဆေးပမာဏလွန်သွားတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ ဘာလုပ်သင့်သလဲ။
အရေးပေါ်အခြေအနေ သို့မဟုတ် ဆေးပမာဏလွန်သွားတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ အရေးပေါ်ဆေးရုံဆေးခန်းများသို့ သွားရောက်ကုသမှုခံယူပါ
ဆေးသောက်ဖို့ လွတ်သွားခဲ့ရင် (မေ့သွားခဲ့ရင်) ဘာလုပ်ရမလဲ။
Hydrite ဆေးပြား ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဇူလိုင် 25, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဩဂုတ် 2, 2017
Hydrite Tab. http://www.medical-explorer.com/drugs-u/uphalyte_1.html. Accessed October 18, 2016.
Hydrite Tab. https://www.drugs.com/mmx/oral-rehydration-salts.html. Accessed October 18, 2016.
Hydrite Tab. http://www.mims.com/philippines/drug/info/hydrite. Accessed October 18, 2016.
Hydrite Tab. http://www.tabletwise.com/nigeria/hydrite-tablet. Accessed October 18, 2016.